अमेरिकी एयर फोर्सको जहाज नियमित नेपाल आउने, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
अमेरिकी एयर फोर्सको जहाज नियमित नेपाल आउने, के हो यथार्थ ?
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भए लगत्तै नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौं ओर्लिएपछि तरंग नै पैदा भयो। तर यसअघि पनि अमेरिकी सेनाको जहाज आउने गरेको एयरपोर्ट प्रशासनले जनाएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी वायुसेनाको कार्गो सामान बोक्ने ठूलो जहाज अबको केही दिन नियमितजसो काठमाडौं ओर्लने सूचना सार्वजनिक भएको छ। यही क्रममा आज कूटनीतिक ३३ वटा पार्सल छाडेर फर्किएको हो।
आज बिहान उक्त जहाज थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक हुँदै काठमाडौं आएको हो। उक्त जहाज बिहान सवा नौ ९ बजे अवतरण गरेर केही बेरमै फर्केको हो। डिप्लोम्याटिक पार्सल’ बोकेर आएको भनिएको उक्त विमान र अन्य विवरण गोप्य राखिएको छ।
युएस एअरफोर्सको आरसीएच १८१६ कल साइन भएको आजको चार्टर उडानमा यात्रु नभए पनि चालक दलका सदस्यहरुको संख्या १७ जना रहेको बताइन्छ।
हिजोको उडानबाट अमेरिकी दूतावासको ३३ वटा प्याकेज झारिएको थियो । ती सबैको तौल १२ सय केजी भएको भन्सार कार्यालय स्रोतले बतायो । विमानबाट सामान झार्नेबित्तिक्कै दूतावासका प्रतिनिधिले बुझेर लगेका थिए ।
उक्त विमानले अरु केही दिन नियमित रुपमा नेपालमा त्यस्तो सामान ल्याउने विमानस्थलमा खटिएका नेपाल वायुसेवा निगमका एक जना कर्मचारीले बताए । यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत् नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरा भ्रम भएको बताएका छन्।
अनुदानकै कारण जनमानसमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भ्रम रहेको भन्दै उनले कुनै पनि देशको सेना आए आफू अग्रपङ्क्तिमा बसेर लड्नसमेत तयार रहेको बताए।
कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका जितपुरमा १२औँ कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना विद्युत् र सडकको परियोजना रहेको स्पष्ट गरे।
उनले जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा ठूला र साना गरी छ हजार नदी भए पनि पूर्णरूपमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको बताए।वर्षायाममा धेरै विद्युत् उत्पादन भई खेर जाने समस्या छ, हिउँदमा नपुगेर भारतबाट ल्याउनु परेको छ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् बाहिर बिक्री गर्न सकिए व्यापार घाटा कम हुन्छ, उनले भने। उनले सरकार व्यवसायीमैत्री रहेको हुँदा उद्योग व्यवसायीको समस्यामा सहयोग गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताए।
सरकार र जनता एउटै सिक्काको दुई पाटो रहेको जनाउँदै उनले सबैलाई सहयोग गर्ने विश्वास साट्न चाहेको बताए। कपिलवस्तु महोत्सव चैत १३ सम्म चल्नेछ।
तेस्तै, एमसीसी पास भएको महिनादिन नबित्दै अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनालाई किन बोलायो हवाइ ? के भन्छ जंगीअड्डा ?अमेरिकाको हवाइमा आयोजना हुने द्विपक्षीय अमेरिकी स्थल सेनासँगको नियमित वार्तामा भाग लिन नेपाली सेनासहितको उच्चस्तरीय नेपाली टोली अ‍ेमेरकाको हवाइ जाने भएको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना अनुमोदन भएको महिनादिन नबित्दै किन नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच भेटवार्ता हुदैछ ? भन्ने चासोमा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले यो हरेक दुई वर्षमा हुने नियमित सैनिक वार्ता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता सिलवालले रक्षा, परराष्ट्र र नेपाली सेनासहित ११ जनाको प्रतिनिधि मण्डल हवाइ जाने निश्चित भएको बताए। ‘आयोजक मुलुकले गरेको निमन्त्रणका आधारमा प्रतिनिधिमण्डल तय हुन्छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद बैठकले यो विषयमा निर्णय गरेपछि मिति तय हुने प्रवक्ता सिलवालले जनाए। उक्त कार्यक्रममा दुई देशका सेनाबीचको आपसी सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिकाले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा इण्डोप्यासिफिक सैनिक रणनीति लागू गर्दै आएको छ।
यस्तै यता अमेरिकामा बसेका नेपालीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन टेक्सासको ड्यालस शहरमा हुने भएको छ। एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका ९ए।एन।ए।० को अगुवाइमा सो सम्मेलन हुन लागेको हो। एएनएका अध्यक्ष विजयराज भट्टराईका अनुसार जुलाई २ र ३ मा नेपाली समाज टेक्सासको होष्टमा सो सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।
संसारका बिभिन्न देशमा रहेको प्रबुद्ध नेपालीहरु, आ–आफ्नो बिषयमा विज्ञता प्राप्त व्यक्तिहरु समेटेर बिशेष जानकारीमुलक कार्यक्रमहरु राखिएको एएनएले जनाएको ।
सम्मेलनमा नेपाल फोरम, टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेशन, बिजनेस फोरम, किड्स इभेन्ट्स, वुमेन्स फोरम, ब्रेन गेन्ब्रेन ड्रेन, डिजे्कन्सर्ट, स्पोर्ट्स को अलावा फिल्म फेस्टिभलको आयोजना गरिने भएको ।
अमेरिकामा संघ संस्थाको इतिहासमा जुलाई महिनालाई ए.एन.ए. महिना पनि भन्ने गरिन्छ । सन १९८३ को स्थापनाकालदेखि नै जुलाई ४ को सप्ताहन्त यस संस्थाले बिबिध कार्यक्रम तथा सम्मेलन आयोजना गर्दै आइरहेको छ।